Ukudla Kwamathambo: Nakhu Okudingeka Ukwazi - Inhlabathi Nomanyolo
Ukudla Kwamathambo: Nakhu Okudingeka Ukwazi
Kuyini isidlo seBone?
Yimaphi ama-Nutrients Esidlweni Sethambo?
Izinzuzo Zokudla Kwamathambo
Izingqinamba ze-Bone Meal
Ungasisebenzisa Kanjani Ukudla Kwamathambo
Ungathenga Kuphi Ukudla Kwamathambo
Njengomuntu osebenza engadini, ufuna izitshalo zakho zikhule zibe zinkulu futhi ziqine. Ukufeza lokho kepha, kuzodingeka ukuthi ukhulise impilo yabo ngohlobo oluthile lukamanyolo. Kule ndatshana, sizoxoxa ngomanyolo osebenzayo, nokho ongashayi eceleni: isidlo sethambo.
Akukhona nje ukuthi ukudla kwethambo kungokwemvelo, kepha kugcwele izakhi zomzimba. Ngokuyinhloko ihlinzeka nge-phosphorus, enye yezakhi ezintathu zezitshalo eziyinhloko, kodwa futhi ne-calcium ne-nitrogen. Isilinganiso esijwayelekile se-NPK sokudla kwethambo singu-3-15-0, esihle kuma-bulb nezitshalo eziqhakazayo.
Ngokubona kwami, into ehamba phambili ngokudla kwamathambo ukuthi inobungani bemvelo futhi iyinto ephilayo. Ukuyisebenzisa engadini yakho kulula futhi kuphephe kakhulu. Qhubeka ufunde ukuze ufunde konke mayelana nalomanyolo omnandi!
Izinketho ezinhle zokudla kwethambo:
Umanyolo Wokudla Kwethambo LikaJobe
Isimangaliso-Gro Nature's Care Organic Bone Meal
Umpe weSidlo Sokuvuna Soketshezi Lwe-Gods Herculean
Izinsizakusebenza zokudla kwamathambo ekukhuleni kwezimpande, ukuqhakaza kwezimbali kanye nezithelo.
Ukudla kwamathambo yilokho kanye - amathambo. Imvamisa ithathwa ezinkomeni njengomkhiqizo wokuhlaba. Amathambo ashubile ukuwahlanza bese eqeda phansi. Kuthengiswa njengempuphu evelayo noma kwenziwe ngamapellets noma uketshezi. Kungazwakala kubi kakhulu, kepha uma ucabanga ukuthi okwemvelo kubola kanjani ngokwemvelo ukondla izitshalo emvelweni, kunengqondo ngokuphelele. Ngokusebenzisa lesi sichibiyelo esisebenzisekayo, umane unikeze izitshalo zakho uhlobo lwezichibiyelo ezizisebenzisile ngaphambi kokuba kuthuthukiswe umanyolo wanamuhla.
Akumangalisi ukuthi ukudla kwethambo kuvame ukudideka noma kuhlotshaniswe nakho isidlo segazi . Kunokwehluka okubili okuyinhloko. Okokuqala, ukudla kwegazi kwenziwa ngegazi elingenamanzi. Okwesibili, ihlinzeka kakhulu nge-nitrogen esikhundleni se-phosphorus. Noma ngabe lezi ezimbili zifana ngokuthi zombili ziyimikhiqizo yezilwane, azishintsheki.
Njengoba kushiwo, umanyolo wokudla wethambo ikakhulu unikeza i-phosphorus (i-P ku-NPK). Lesi yisakhi esibalulekile sezitshalo ngoba siyazisiza zikhule.
I-phosphorus yisakhi somzimba, ebantwini nasezilwaneni, esakha amathambo aqinile. Lapho lawo mathambo ekugcineni ebola, akhiphela i-phosphorus enhlabathini lapho izitshalo zingayisebenzisa khona. Bese, esikhundleni samathambo, i-phosphorus isiza izitshalo ukwakha iziqu ezinempilo, amaqabunga, izimbali nembewu. Kwezinye izimo, izitshalo ziyadliwa izilwane noma abantu, zibuyisele i-phosphorus emsebenzini ekuqiniseni amathambo (phakathi kwezinye izinto).
Izitshalo zithembele ku-phosphorus ukunika amandla i-photosynthesis, ukukhula nokuzala (izimbali nezithelo). Iphinde idlale ezinye izindima ekuphefumuleni kwamaselula, i-DNA, i-RNA, nokudluliswa kwamandla. Ngamafuphi, ngaphandle kwe-phosphorus, izitshalo zakho ngeke zisinde. Ukuze ufunde kabanzi ngokuthi kungani lesi sakhi somzimba nezinye zibaluleke kangaka, hlola indatshana yethu ku tshala izakhamzimba .
Lo manyolo wensimu uphinde unikeze inani elihle le-calcium ne-nitrogen ethile. Kodwa-ke, ivame ukusetshenziselwa kakhulu i-phosphorus, futhi i-calcium noma i-nitrogen iyinzuzo eyengeziwe enhlabathini yensimu.
Faka ukudla kwethambo ngaphambi kokutshala ukuze izitshalo zikhulise i-phosphorus.
Njengoba sishilo, ukudla kwethambo kuhle ekusizeni izitshalo zikhule. Ubumnandi abupheli lapho! Ukungeza ukudla kwethambo engadini yakho kuzoletha izinzuzo eziningi, njenge:
imibala yezinwele ehambisana nezinwele ezinsundu
Izithelo eziphakeme kanye nembewu
Isakhiwo sezimpande esiqinile sezitshalo ezisanda kwakhula
Ikhuthaza ukukhula okunempilo, okunothile
Isiza ukuhlinzeka ukumelana nezinambuzane nezifo
Ikhuthaza ama-blooms amakhulu, amahle
Ukudla kwamathambo kungumanyolo owehlukile wezinto eziphilayo ongangezelwa izitshalo eziqhakaza njenge roses kanye neamaryllis. Iphinde ikhulise ukukhula kwama-alliums afana negalikhi, amalikhi , no-anyanisi. Ukudla kwamathambo okujwayelekile kuvame ukusetshenziselwa ukusungula utshani ngoba kusiza izitshalo ezincane ukuthi zikhule ngokushesha. Kuyasiza ukuthuthukisa isakhiwo sezimpande eziqinile futhi kunikeze i-calcium utamatisi izithelo. Sekukonke, ngomunye wemikhiqizo abantu abaningi okufanele bayigcine isetshenziselwe ukusetshenziswa kwensimu!
Azikho izingqinamba eziningi ekudleni kwethambo. Kodwa-ke, njenganoma yimuphi umanyolo, kufanele wazi ngamathuba amabi. Nawa amanye ama-downsides kumanyolo wokudla wethambo:
Kukhululwa kancane, ngakho-ke ngeke kunikeze izitshalo zakho umfutho osheshayo
Lo akuwona umanyolo olinganiselayo. Uma izitshalo zakho zidinga izakhi zomzimba ezengeziwe, kuzofanele ufake umanyolo ohlukile kanye nokudla kwethambo.
Uma lingaxutshwanga kahle nenhlabathi, iphunga lingadonsela abakhwabanisi. Gcina isikhwama sigcinwe ngokuphepha lapho izilwane zingakwazi ukufinyelela kuso.
Ukudla kwamathambo kusebenza kuphela emhlabathini one-pH engaphansi kwengu-7. Izimo zenhlabathi ene-alikhali zinciphisa ukuthathwa kwezakhi.
Ukwanda ngokweqile kwe-phosphorus kungakhipha ezinye izakhi zomzimba ezibalulekile ezitshalweni, njenge-iron ne-zinc. Izitshalo ezine-phosphorus eningi kakhulu zizophenduka zibe phuzi, futhi zibonise nezimpawu zokunye ukushoda kwezakhi. I-phosphorus eningi kakhulu ingalimaza ukukhiqizwa kwe-chlorophyll yesitshalo okuholela emaqabungeni aphuzi (okuthiwa i-chlorosis).
Iningi lomhlabathi lihle kakhulu ekulawuleni i-phosphorus ekhishwe, ngakho-ke mancane amathuba okufakwa komanyolo ngokweqile. Kodwa-ke, uma inhlabathi yakho ingenayo i-phosphorus, akufanele ngabe ungeza ukudla kwethambo.
Ngaphambi kokuba ungeze ukudla kwethambo, isivivinyo inhlabathi yakho ukuze uqiniseke ukuthi idinga i-phosphorus. Ngaphandle kwalokho, ubeka engcupheni ukwanda kokufaka umquba ngokweqile, okungalimaza kanye / noma ukubulala izitshalo zakho. Izinsizakalo zokuhlola inhlabathi zivame ukutholakala emanyuvesi ezolimo asendaweni nasemahhovisi kahulumeni. Ungathenga futhi i- ikhithi yokuhlola inhlabathi futhi ukwenze ngokwakho.
Kanye nokushoda kwe-phosphorus, inhlabathi kumele ibe ne-pH engu-7 noma ngezansi ukuze lo manyolo osebenza kahle usebenze kahle. Uma inhlabathi yakho ine-alkaline ethe xaxa, dokotela i-pH ngaphambi kokungeza ukudla kwethambo.
Umthetho omuhle wesithupha uwukuthi sebenzisa isipuni esisodwa ezinyaweni ezimbili zenhlabathi (izinkomishi ezi-3 ngezinyawo eziyizikwele eziyi-100). Amanani angahluka ngomkhiqizo owusebenzisayo, ngakho-ke hlola njalo imiyalelo ephaketheni kuqala. Uma utshala, hlanganisa umanyolo kanye nenhlabathi yokubuyisela emuva. Uma isitshalo sakho sesivele sisemhlabathini, fafaza ukudla kwethambo ngaphezulu bese ubamba inhlabathi ukuze usixube.
Ngama-bulb nezinye izitshalo eziqhakaza entwasahlobo, engeza ukudla kwethambo futhi. Faka isipuni esingu-1/2 lapho utshala ekwindla, usiklwebhe enhlabathini ngaphansi kwesitshalo. Ngemuva kwalokho ungangeza futhi entwasahlobo lapho uqala ukwengeza engadini yakho yasentwasahlobo nehlobo.
Ngemuva kokufaka isicelo, kancane amanzi inhlabathi ukuze isidlo sethambo siqale ukonakala. Izokhipha izakhi zomzimba cishe izinyanga ezine.
Nayi i- ithiphu esheshayo : Bheka isimo sezulu ngaphambi kokufaka umquba. Kulula ukufaka lokhu lapho izimo zomile futhi ungakusebenzela ungqimba olungaphezulu lwenhlabathi.
Imvamisa ungathola ukudla kwethambo online, ezitolo zensimu, ngisho naseWalmart. Nazi ezinye zezincomo zethu eziphezulu.
Umanyolo Wokudla Kwethambo likaJobe, 4 lb
Imifino yomanyolo oyimbudumbudu, izilimo eziyizigaxa, ...
I-OMRI efakwe kuhlu lwengadi yezitshalo yi-USDA; ...
2% Initrogen, 14% phosphate, ne-15% calcium; ...
Lesi yisidlo samathambo esiyimbudumbudu. Kunothuli oluncane ngesikhathi sokufaka kunezinye izinhlobo, kepha lunosayizi omkhulu wezinhlayiyana othatha isikhashana ukonakala.
Ukuthengiswa Isimangaliso-Gro Nature's Care Organic Bone Meal, 3 lb.
Wakha ifreyimu eqinile eqala ezimpandeni
Ukudutshulwa okuncane kwe-phosphorus kusebenza izimanga ku ...
Inikeza ama-bulbs akho, izimbali kanye nama-roses okungeziwe ...
ISimangaliso-Gro sinokudla kwethambo okuphilayo futhi okulinganiswe kakhulu. Kusefomini eyimpuphu yokusetshenziswa okulula nokuxubeka.
Umpe weThe Gods Herculean Harvest Liquid Bone Meal + Twin Canaries Chart & Pipette - 1 Quart Bheka Intengo yamanje
Njengefomu eliwuketshezi, lesi sidlo sethambo silungele ukusetshenziswa kuma-hydroponics. Kuza neshadi lokuguqulwa nepipette.
Q: Ngingasho kanjani ukuthi izitshalo zami zidinga i-phosphorus ethe xaxa?
A: Izimpawu zokushoda kwePhosphorus zifaka ukukhula okungakhuli, ukuvuthwa okulibazisekile, nezithelo ezincane. Futhi, amaqabunga amadala angashintsha abe nsomi ngaphambi kokufa. Kunzima ukulungisa imiphumela yokushoda, ngakho-ke into engcono kakhulu ongayenza ukubamba lezi zimpawu kusenesikhathi bese ufaka umanyolo ngokushesha.
Q: Ingabe ukudla kwethambo kunesifo senkomo esile?
IMP: Cha, lona umanyolo ophephe kakhulu. Izilwane ezisetshenziselwa ukwenza ukudla kwethambo nazo zingabakhiqizi benyama, ngakho-ke zigcinwa ziphilile futhi zingenasifo sezinkomo ezihlanyayo.
Q: Ingabe ukudla kwethambo kungangcolisa imithombo yamanzi?
IMP: I-phosphorus eyeqile ingagezwa yimithombo yemvelo yemvelo futhi ibangele ukukhula kwe-algal. Lokhu kuvame ukwenzeka kuphela kumanyolo oncibilikiswa ngamanzi. Ukudla kwamathambo ngokuvamile kuphephile ekungeniseni i-phosphorus eningi kakhulu emvelweni.
Q: Ingabe umanyolo wesidlo sethambo unobuthi?
IMP: Ukudla kwamathambo akuyona into enobuthi, kepha kungadala ukucindezeleka kwamathumbu uma kudliwa ngabantu noma yizilwane. Uma unezilwane ezifuywayo noma izingane, zihlanganise kahle emhlabathini bese ugcina isikhwama lapho zingakwazi ukufinyelela kuso.
Q: Ngabe ukudla kwethambo kungasetshenziswa kuma-hydroponics?
A: Yebo! Ukudla kwamathambo kuyisixazululo esihle uma uzama ukwenza i-organic hydroponics. Ngaphambi kokuyisebenzisa, kufanele ubale izakhamzimba ezidingekayo nokuthi uzodinga malini ithambo lokudla. Ngosizo oluthile ngalokhu, sinezihloko ezikhuluma ngazo izixazululo ze-hydroponic izakhi futhi izakhi zomzimba ezijwayelekile ze-hydroponic .
Ingabe usukulungele ukuzama lo manyolo wemvelo? Uma kwenziwa kahle, ukwengeza isidlo sethambo kungaba yinto enhle kunazo zonke owake wazenzela izitshalo zakho!
Andi dorfman noJosh murray
2016 umbukiso wemfashini oyimfihlo we-victoria
izipho zabahlengikazi ezigulini
amagquma e-beverly, iziqephu ezingama-90210